Guddiga gurmadka Fatahada Shabeele oo lacago lagu wareejiyaay – Radio Daljir
Maajo 16, 2018 6:01 b 0
Deeqdaan lagu wareejiyay Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Baardheere ayaa gudoomay lacag kaga timid Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Guddigaan Maxamed Muxumad Aadan oo dhanka kalana ah Gudoomiyaha Gobolka Gedo ayaa guddoomay lacag gaareysa $100 kun oo Doolar oo guud ahaan Dadka Gobolka kunool la gaarsiinayo.
$25 Kun oo Doolar kamid ah Lacagtaasi waxaa loogu talagalay Dadka Barakacayaasha ah, isagoona Ballanqaaday in ay u qeybin doonaan dadka u baahan Gurmadkaasi.
Gudoomiye Maxamed ayaa sheegay in Maalmaha soo socda ay filayaan in ay Gaaraan Gurmad Gedo lagu geynayo Diyaarado oo isugu jiro Cunto, Teendhooyin, Maro-Kaneecooyin Maacuun iyo Baco.
Dadka deeqdaan la gaarsiinayo ayaa isugu jira Beeraley iyo Xoolo dhaqato Saameyn ku yeeshay Abaar, Fatahaad Wabiga Jubba uu ku sameeyay iyo Daadad kasoo rogmay roobabkii halkaa ka da’ay.